Axmed Siilaayo oo saraakiil British kulan kula yeeshay dusha markab dagaal oo ku soo… – SBC
Axmed Siilaayo oo saraakiil British kulan kula yeeshay dusha markab dagaal oo ku soo…
Posted by editor on Julaay 7, 2011 Comments
Madaxweynaha maamulka la magac baxay Somaliland Axmed Maxamuud Maxamed (Siilaanyo) ayaa kulan ka dhacay dusha sare ee markab dagaal wuxuu kula yeeshay saraakiil ka tirsan ciidamada badda Ingiriiska, iyaodo markabkaasi uu ku soo xirtey dekada magaalada Berbera.
Markabka dagaal ee ku soo xirtey dekada magaalada Berbera ayaa ahaa kii ugu horeeyey ee dekadaasi soo gaara mudo laga joogo 50 sano, iyadoo xiligaasi ugu dambeysay ay gacanta ku hayeen gobolada Waqooyiga Soomaaliya guumeystihii Ingiriiska.
Kulankan uu la yeeshaay Axmed Siilaanyo saraakiisha Ingiriiska ayaan saxaafada la sheegin waxa looga wada hadley, waxaase ilo wareedyo ku dhaw dhaw xafiiska Madaxtooyada Somaliland ay sheegayaan in kulankaasi lagu soo qaaday arimo la xiriira xaaladaha amaan ee manqdiqada gaar ahaan dhinacyada burcad badeeda & waliba waxa loogu yeero argagixisada caalamiga ah oo walwal laga qabo inay ka faa’ideystaan khalaalasaha siyaasadeed ee ka taagan Yemen & Somaliya.
Intii aanu ku soo xiran markabkaasi dekada magaalada Berbera ayaa waxaa aad loo adkeeyey amaanka dekada, waxaana lagu dhexarki karey gudaha dekada ciidamada badda ee British-ka oo gudaha ugu sugan dekada, kuwaasi oo hubkoodii dhulka la yimid, isla markaana doonyo yar yar kaga soo degay markabka.
Dhinaca kale Madaxweynaha Maamulka la magac baxay Somaliland Axmed Siilaanyo wuxuu maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha magaalada Berbera madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo isagoo u ambabaxay magaalada Jubba ee caasiamda wadanka Koonfurt Suudaan oo ah wadan cusub oo ku soo biiray qaarada Afrika ka dib markii dadka wadankaasi ay u codeeyaan inay ka go’aan dalka Suudaan intiisa kale.
Sarkaal ka tirsan madaxtooyada Somaliland ayaa u sheegay SBC in madaxweyanah Somaliland uu ka helay casuumad rasmi ah madaxweynaha cusub ee Koonfurt Suudaan Silver Kir, iyadoo maalinta sabtida xaflad loogu waqan galayo wadanka cusub ee Koonfurta Suudaan ay ka dhici doonto magaalada Jubba.